घर अमेरिकी स्टेर्स Rodrygo गोल्डहुड स्टोरी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्यहरू जान्छ
रोड्रिगो बालवस्तुको कथा प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्यहरू एलबी द्वारा जान्छ। मार्कालाई क्रेडिट
एलबीले पूर्ण स्टोरीको एक फुटबल प्रतिभाशाली नाम प्रस्तुत गर्दछ "एनey Neymar“। हाम्रो रोड्रिगो सिल्वा डे गोडस् चाउडहुड स्टोरी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्यहरू तपाईंको बाल्यकालको समयदेखि आजको दिनसम्म तपाईंलाई उल्लेखनीय घटनाहरूको पूर्ण खाता लिएर आउँदछ।
रोड्रिगोले बाल्यकालको कहानी जान्छ - मितिमा विश्लेषण
यो विश्लेषणमा आफ्नो प्रारम्भिक जीवन, पारिवारिक पृष्ठभूमि, प्रसिद्धि भन्दा पहिले जीवन कथा, प्रसिद्धि कथा, सम्बन्ध, व्यक्तिगत जीवन र जीवन शैली आदिको वृद्धि भएको छ।
हो, सबैलाई थाहा छ उही ब्लिटिit्ग अपमानजनक हतियार हो कि रियल म्याड्रिड हराउन सक्दैन। जहाँसम्म, केवल केहि Rodriygo Goes को जीवनी विचार जो धेरै रोचक छ। अब थप विज्ञापन बिना, सुरु गरौं।
रोड्रिगोले बाल्यकालको कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्यहरू जान्छ - प्रारम्भिक जीवन र पारिवारिक पृष्ठभूमि
रोड्रिगो सिल्भा डे गोजको जन्म 9th जनवरी 2001 मा उनको आमा, डेनिस गोज र बुबा, एरिक बाटिस्टा गो गोज, साओ पाउलो, ब्राजिलको राज्यमा भएको थियो। तल उसको जवान सुन्दर आमा बुबाको फोटो छ।
रोड्रिगो प्रारम्भिक जीवन कहानी जान्छ। क्रेडिट ब्रान्ड.
रोड्रिगो बुबा र बुबा दुबै किशोर-किशोरीहरूबीच धेरै जवान र सफल वैवाहिक जीवनको फल हो। रोड्रिगोको बुबा एरिक हाल यो लेख लेख्ने समय (अगस्त 34) को रूपमा 2019 वर्ष हो। उसको आमा पनि 30 को शुरुमा हुनुपर्छ। निहितार्थको मतलब यो हो कि उसको बुबाले उसलाई थियो जब ऊ उमेरको 17 वर्ष थियो। रड्रिडो आफ्ना बाबुआमाको पहिलो बच्चाको रूपमा जन्मेका थिए। उहाँ धेरै वर्षसम्म उनीहरूको एक मात्र बच्चाको रूपमा हुर्कनुभयो, दाजुभाइ वा दिदीबहिनी थिएन।
रोड्रिगो गोज परिवारको मूल साओ पाउलो राज्यमा अवस्थित ओसास्कोको नगरपालिकाबाट भएको हो। यो जीडीपी मापन द्वारा ब्राजिलमा सबैभन्दा समृद्ध नगरपालिका मध्ये एक हो।
रोड्रिगो परिवारको उत्पत्तिमा जान्छ। क्रेडिट CGarchitect
व्यस्त शहर साओ पाउलो जहाँ रोड्रीगो हुर्कनुभएको रिओ दि जेनेरियो मानिसहरु भन्दा बढी कारहरु छ। साथै, यो एक सहर हो जुन ब्राजिलका सम्पूर्ण जनसंख्याले खपत गरेको 1 मिलियन पिज्जा बाहिर 1.6 मिलियन पिज्जा खपत गर्दछ।
रोड्रिगोले बाल्यकालको कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्यहरू जान्छ - शिक्षा र क्यारियर बिल्डअप
रोड्रिगो मध्यमवर्गीय पारिवारिक पृष्ठभूमिमा हुर्किए जसको आय खेलबाट आयो। उसको बुवाले ब्राजिलको तल्लो लिगमा फुटबलरको रूपमा जीवन शुरू गर्नुभयो जसले उनको परिवारको लागि पर्याप्त पैसा कमाएको थिएन। कम उमेरमा उनको छोरो भएको, एरिकलाई थाहा थियो कि उनी आफ्नो क्यारियरमा धेरै सफल हुँदैनन्। उसले आफ्नो फुटबल सपना आफ्नो छोरा, रोड्रिगो मार्फत जारी राख्न योजना बनाउने निर्णय गरे।
प्रारम्भमा, रोड्रिगो उनले आफ्नो परिवारको बैठक कोठामा आफ्नो फुटबल फुटन सुरु गरे, एउटा यस्तो उपलब्धि जसले सुन्दर खेलप्रति उनको प्रेम जगायो। सोकर शिक्षा तुरुन्तै उनको बुबाको निर्देशनलाई धन्यवाद दिए। एरिक जो रियल म्याड्रिडका फ्यान थिए उनको छोराले सीप र क्यारियर मार्ग अनुकरण गर्ने कुरा निश्चित गरे Robinho उनीहरूले धेरै उच्च ठाने। रोड्रिगो भर्खरको भिडियोको संपर्कमा थिएन Robinho, तर आफ्नो चालहरु को एक नक्कल।9को उमेरमा जब उनले सान्तोसको साथ ट्रायलमा भाग लिन कलअप पाउँथे, उनको बुबाको घमण्डको कुनै सीमा थिएन।
रोड्रिगोले बाल्यकालको कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्यहरू जान्छ - प्रारम्भिक क्यारियर लाइफ
रोड्रिगो फुटबलको लागि आवेशमा उत्रिए र उनले उडान र colors्गमा ट्रायल पार गरेको र सान्टोसको एकेडेमीमा भाग लिएको छ जसले उनलाई आफ्नो जीवनको आधार बनायो। 2010 को उमेरमा 10 मा सन्तोसको युवा प्रणालीमा सम्मिलित हुँदै। रोड्रिगोका अभिभावकहरूले आफ्नो छोरालाई क्लबको फुटसल टीममा खटाउनु पर्नेमा जोड दिए। यो परिवारको फुटबल मुर्ति द्वारा लिइएको पथ हो, कुनै अन्य व्यक्ति छैन तर पौराणिक Robinho.
10 को उमेरदेखि नै, रोड्रिगोले ठूला र ठूला केटाहरूसँग खेल्न शुरू गरे। ऊ सँधै आफ्नो खेलमा बाहिर खडा हुन्थ्यो। अगाडि खेल्ने फुटसल खेल्दा बललाई उसको खुट्टामा राख्ने, विगतको डिफेन्डर्सलाई चकित पार्ने र गोल गर्न आफ्नो गति प्रयोग गर्ने टेक्निक पाएको थियो।
रोड्रिगो प्रारम्भिक क्यारियर जीवन जान्छ। सूर्यलाई क्रेडिट
रोबिन्होको फुटसलको साथ खेल्ने बर्षको खेलहरूमा पनि यस्तै विशेषता थियो। Rodrygo रूपमा विकास गर्न जारी राख्यो, उसले आफैंमा साथीहरूको बीचमा लगातार उत्कृष्ट देखेको थियो। यो उपलब्धि प्रदर्शन गर्न स्थिर दबावमा ल्यायो जुन उनले आफ्नो युवा टीमको कप्तान बन्न सकेका थिए।
Rodrygo Goes- एक युवा नेता बन्ने। आईजी लाई क्रेडिट
रोड्रिगोले बाल्यकालको कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्यहरू जान्छ - सडकको प्रसिद्धि कथा
Rodrygo 16 मा पुग्दा, पेशेवर सम्झौता र छात्रवृत्तिको बारेमा कुरा उठ्यो। मार्च एक्सएनयूएमएक्समा, उसलाई व्यवस्थापक डोरिवल ज्युनियरले पहिलो टोलीमा बोलाए। रोड्रिगोले मार्च २०१N XUMUM को 2017st मा आफ्नो कोपा लिबर्टाडोरसको शुरुवात गरे जुन 1 वर्ष र 2018 दिन पुरानो प्रतियोगितामा देखा पर्ने सबैभन्दा कान्छो सान्तोस खेलाडीको रूपमा रेकर्ड तोडे।
दुई हप्ता पछि उही प्रतिस्पर्धामा, रोड्रिगोले टूर्नामेन्टमा पहिलो गोल गरे। यस उपलब्धिले उनलाई कोपा लिबर्टाडोरसमा स्कोर गर्ने सबैभन्दा कान्छो ब्राजिलियन भयो। रोड्रीगोलाई एक्सएनयूएमएक्सको लागि क्याम्पियोनाटो पालिस्टा बेस्ट न्यूकमर पनि प्रदान गरिएको थियो।
रोड्रिगो क्याम्पियोनाटो पालिस्टा पुरस्कारको साथ जान्छ। आईजी लाई क्रेडिट
रोड्रिगोले बाल्यकालको कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्यहरू जान्छ - फेम स्टोरीमा उठाउनुहोस्
रोड्रिगोले दक्षिण अमेरिकाको सबैभन्दा तल्लो युवा सम्पत्ति बन्नको लागि प्रख्यात उदासीनता झेल्नु पर्यो र यो वृद्धि केवल उनको मूर्ति रोबिन्होले हासिल गरेको तुलनासँग मात्र मिल्छ। उनको उल्लेखनीय ड्रिलिंग कौशलले रियल म्याड्रिड स्काउट्सलाई आकर्षित गर्‍यो जो त्यस समयमा दक्षिण अमेरिकी खेलाडीहरूमा उनीहरूको अन्त्य छापामा थिए, जसमध्ये एक जना थियो विनिसीस जूनियर.
यो उनको जीवनको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण दिन हो जुन अन्तमा आयो। त्यस दिन रोड्रिगोले रियल म्याड्रिडको लागि सम्झौता गरेर आफ्नो सपना पूरा गरे जुन समय भन्दा अघि नै बुक हुनेछ भन्ने देखिन्छ। ठीक on जून 15th को 2018th, रियल मैड्रिड रोड्रोगोको हस्तान्तरणको लागि सान्तोससँग सम्झौतामा पुगे, जुन एक वर्ष पछि, जून 2019 मा ट्रिगर भएको सम्झौता।
पहिले, यो एक्सएनयूएमएक्स-वर्ष प्रतिक्षा थियो, तब रद्रिगो गोजको लागि धेरै भावनात्मक समय आयो किनकि उनका आमाबाबुले उहाँलाई मायालु बचपन क्लबमा हार्दिक बिदाइहरू भन्न मा सामेल हुनुभयो।
रोड्रिगो भावनात्मक भइरहन्छ किनकि ऊ आफ्नो प्यारो सान्तोसलाई बिदाइ दिन्छ। आईजी लाई क्रेडिट
"यसले मलाई म्याड्रिड जान प्रेरित गर्दछ, जुन विश्वको सब भन्दा ठूलो क्लब हो। क्लबको सरासर आकारका लागि, यो मेरो लागि डरावना हो, तर राम्रो डर। यसले मलाई अझ उत्प्रेरित गर्छ र यसको मतलब यो हो कि तिनीहरू ममाथि किन विश्वास गर्छन् र म हस्ताक्षर गर्दा मलाई यो देखाउनु पर्छ। ”
रोड्रिगोले हस्ताक्षर गर्दा भने।
Rodrygo छ वास्तवमा ब्राजिलबाट बाहिर आउँदै गरेको अनौंठो फर्वार्डहरूको अन्तहीन उत्पादन लाइनको बीचमा एक उत्तम हो। हाम्रो लागि, उनी ब्राजिलियन फुटबल पछि अर्को सुन्दर वाचा मानिन्छ नेमार जेएनआर. बाकि, जस्तै तिनीहरू भन्छन्, इतिहास हो।
रोड्रिगोले बाल्यकालको कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्यहरू जान्छ - सम्बन्ध जीवन
उनको आमाबाबुले किशोरावस्थामा उनको विवाह भएको कुरालाई ध्यानमा राख्दै, यो प्रश्न सोध्न उचित छ कि रोड्रीगोको आफ्नो जवान उमेरमा प्रेमिका वा श्रीमती छ कि छैन।
रोड्रिगो सम्बन्धको जीवनमा जान्छ। आईजी लाई क्रेडिट
रिड्रिगोको प्रसिद्धिमा वृद्धि र रियल म्याड्रिडमा सहभागी हुने प्रशंसकहरूलाई विश्वास गर्न छोड्छ कि एक सम्भव छुपाइएको रोमान्स उसको लागि अवस्थित छ, सायद जो कोही सार्वजनिक आँखाको छानबिनबाट बच्छ केवल किनकि उसको प्रेम जीवन धेरै निजी हो र सम्भवतः नाटकमुक्त छ।
लेख्ने समयमा, हामी विश्वास गर्छौं कि रोड्रिगोले आफ्नो क्यारियरमा ध्यान केन्द्रित गर्न रुचाएका छन् र आफ्नो निजी जीवनको बारेमा कुनै कुरा रोक्न खोजेका छन्, जसले उनको प्रेम जीवन र डेटि history ईतिहासको बारेमा कुनै पक्का छैन।
रोड्रिगोले बाल्यकालको कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्यहरू जान्छ - व्यक्तिगत जीवन तथ्य
रड्रिगोलाई चिन्नु व्यक्तिगत जिन्दगीबाट टाढा जान्छ तपाईंलाई उसको सम्पूर्ण तस्वीर प्राप्त गर्न मद्दत गर्दछ।
पिचबाट टाढा, रोड्रिगोसँग स्वतन्त्रताको आन्तरिक अवस्था छ जुन उसलाई आफ्नो व्यक्तिगत जीवनमा उल्लेखनीय प्रगति गर्न सक्षम गर्दछ। ब्राजिलमा हुँदा पातलो सुपरस्टारले पिचको बाहिर सामान्य जीवन बिताउँछ। तलको फोटोको आधारमा, तपाईंले रोड्रिगोलाई म्याड्रिडको सडकमा स्केटबोर्डको साथ देखेर छक्क मान्नु पर्दैन।
रोड्रिगो स्केटबोर्डको साथ जान्छ। आईजी लाई क्रेडिट
आफ्नो व्यक्तिगत जीवनमा, रोड्रिगो गोजसँग आत्म-नियन्त्रणको विशेषता छ, आफ्नो जीवनको लागि ठोस र यथार्थपरक योजनाहरू बनाउने क्षमता। उहाँ एक नेता हुनुहुन्छ जसले युवा तहमा उनको कप्तानीको समयमा अवलोकन गरे अनुसार नेतृत्व गर्न सक्नुहुन्छ।
रोड्रिगोले बाल्यकालको कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्यहरू जान्छ - पारिवारिक जीवन
Rodrygo गो आमा बुबा र आफन्तहरु वर्तमान मा उहाँ मा एक कठोर मानसिकता जगाउने को लाभ उठाइरहेका छन्। उनका बुबाआमा रियल मैड्रिडको लागि आफ्नो क्यारियरको सुरुदेखि नै उनका छोराको समर्थनको सराहना गर्नुहुन्छ। तल भिडियो सबूतको एक टुक्रा हेर्नुहोस् जहाँ एक 9-वर्षीया रोड्रिगो आफ्ना आमाबाबुको साथ पुरानो रियल म्याड्रिड शर्टमा उभिए। यो समान 2019 फोटोको साथ देखाईएको छ।
एक पारिवारिक फोटो प्रमाण देखाउन कि Rodrygo बचपन देखि एक वास्तविक मैड्रिड फ्यान भएको छ। क्रेडिट ब्रान्ड.
Rodrygo बुबाको बारेमा: रोड्रिगोको बुबा 34- वर्ष पुरानो पुरानो लेखेको समयमा। तपाईंलाई थाँहा थियो?… एरिक बटिस्टा तल आफ्नो छोराको साथ चित्रित मात्र हालसालै आफ्नो खेल क्यारियरबाट एक दाहिने पछाडि सेवानिवृत्त र अब आफ्नो बुबाको सपना छोराको क्यारियरमा एक हेरचाहकर्ताको रूपमा बाँचिरहेका छन्।
रोड्रिगो गो र उनका फादर- एरिक बटिस्टा डे गो। आईजी लाई क्रेडिट
एरिक बटिस्टा जसका साथी र आफन्तहरू उनलाई अक्सर "शास्त्रीय ब्राजिलियन"साओ पाउलोको क्षेत्रीय लीगमा खेलेको धेरैले भन्ने असफल क्यारियर थियो।
Rodrygo आमा गएको बारेमा: जब यो गम्भीर भव्य आमाको साथ फुटबलरहरूको कुरा आउँछ, हामी भन्न सक्दछौं कि रोड्रिगो सूचीमा सबैभन्दा माथि छ। डेनिस गोहरू सुन्दर मात्र छैनन् तर धेरै जवान (उनको प्रारम्भिक 30 मा) लेख्ने समयमा।
रोड्रिगो आमा-डेनिस जान्छन्। आईजी लाई क्रेडिट
उनी को हुन् भनेर कुनै विचारै नपाई फोटोमा पहिलो चोटि ठेस खाए पछि तपाईं लाग्नुहुन्छ कि उहाँ रोड्रिगोको प्रेमिका हुनुहुन्छ।
रोड्रिगो भाइबहिनी जान्छ: 2018 को शुरुतिर, रोड्रीगोका बाबुआमाको एउटी केटी थिई, जुन रोड्रीगोको एक मात्र बहिनी भयो। एक सानो बहिनीले उनलाई बुबा र पनि महसुस, उनी सबै हुर्काएको महसुस गरी। तल देखिएझैं दुबै भाई र सानी बहिनीको बिचमा गहिरो सम्बन्ध छ।
रोड्रिगो गोले आफ्नो सानी बहिनीलाई माया देखाउँछन्। आईजी लाई क्रेडिट
रोड्रिगोले बाल्यकालको कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्यहरू जान्छ - LifeStyle
बस आफ्नो साथीलाई जस्तै टेकफुसा कोबो, Rodrygo पनि आफ्ना माता पिता को एक बलियो ग्राउन्डिंग छ। उसले आफ्ना पैसाहरू कसरी जाँचमा राख्न सकिन्छ भनेर आफ्ना आमाबुबाको आधारमा धन्यवाद सिकेका छन्। लेख्ने समयमा जस्तै, रोड्रीगोलाई ग्लैमरस जीवनशैली बन्न अनुमति छैन महँगो कारहरूको फ्लीटहरू द्वारा सजिलैसँग देख्न सकिन्छ।
रोड्रिगो लाइफस्टाइल तथ्यहरू जान्छ। क्रेडिट दर्पण
रोड्रिगोले बाल्यकालको कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्यहरू जान्छ - अनियमित तथ्यहरू
ग्रेटको आशीर्वाद प्राप्त गर्दै: रियाल म्याड्रिडमा भाग लिन युरोप जानु अघि रोड्रीगोले ब्राजिलका दुई ठूला फुटबलरहरूबाट आशिष् पाए पेल र वरिष्ठ रोनाल्डो.
रोड्रिगो गो र उसको रोल मोडेलहरू
त्यो वर्ष 2001 जुन रोड्रीगोको जन्म भएको थियो, निम्न साक्षीहरू छन्;
पहिले, जुन9/ 11 को रूपमा जानिन्छ आक्रमणहरू भयो।
त्यो वर्ष 2001 लाई "शार्क वर्ष को गर्मी“। यो वर्ष विश्वव्यापी शार्क आक्रमणको सर्वाधिक संख्या रेकर्ड गरियो।
वर्ष 2001 ले एड्स औषधिहरूलाई विशेष गरी अफ्रिकामा घातक रोगसँग लड्न मद्दत गर्न आवश्यक 90% सम्म छुटको साथ सब्सिडी दिइयो।
तथ्य जाँच गर्नुहोस्: हाम्रो रोड्रिगो गोल्डहुड स्टोरी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्य पढ्नका लागि धन्यबाद। मा LifeBogger, हामी सटीकता र निष्पक्षताको लागि प्रयास गर्छौं। यदि तपाईंले केहि कुरा खोज्नुहुन्छ जुन सही देखिएन भने कृपया तल टिप्पणी गरेर हामीलाई साझेदारी गर्नुहोस्। हामी सधै आफ्नो विचारहरुको मूल्य र आदर गर्नेछौं।
अक्टोबर 8, 2017
एडसनसन Moraes बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य
Mesut Ozil बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य
नोभेम्बर 14, 2017